चिनियाँ टाेली आउन ढिलाई हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् अनिश्चित – मातृभूमी
चिनियाँ टाेली आउन ढिलाई हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् अनिश्चित
Mccnepal December 24, 2021
मातृभूमी संवाददाता । ०९ पौष दैलेख
दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को काम अनिश्चित बनेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली आउन ढिलाई गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को काम अनिश्चित बनेको हो । चिनियाँ प्राविधिक टोली आउन ढिलाई गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को अध्ययन तथा अनुसन्धानमा ढिलाई भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले वताए ।
भूगर्भविद डा. त्रिपाठीले भने, ‘चिनियाँ प्राविधिक टोली आउन ढिलाई गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् कार्य अनिश्चित वनेको छ ।’ चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल नआएसम्म पेट्रोलियम खानीको उत्खनन्का लागि अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढ्न नसक्ने भूगर्भविद डा. त्रिपाठीले बताए ।
कोरोना महामारीका कारण चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल फर्किएको छैन । चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल नफर्कदा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को काम अन्यौलमा परेको हो । ‘पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अध्ययन र ड्रिलिङको उपयुक्त स्थान एकीन भइसकेको छैन, चिनियाँ प्राविधिक टोली नआउँदा दोस्रो चरणको काम रोकिएको छ’ भूगर्भविद डा. त्रिपाठीले भने, ‘आयोजनाले प्राविधिक टोली कुरिरहेको छ, उहाँहरु आउने वित्तिकै दोस्रो चरणको काम सुरु हुन्छ ।’
पहिलो चरणमा चिनिया प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ ठाउँमा ग्यास चुहावट भइरहेको पुष्टि गरेको थियो । सेस्मिक सर्भे अनुसार दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर कति मात्रामा पेट्रोल छ, उत्खनन् गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने एकीन भएको छैन । जसका लागि दोस्रो चरणको अध्ययन आवश्यक पर्दछ ।
पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागी दोस्रो चरणको सर्भे (ड्रिलिङ) गर्नु पर्दछ । जसका लागि झण्डै चार किलोमिटर जमिनमुनि ड्रिलिङ गर्नुपर्ने प्राविधिक टोलीले जनाएको छ । ड्रिलिङपछि मात्रै खानी उत्खनन्का लागी जमिनको भौगोलिक बनावट र लाग्ने खर्चको एकीन गर्छ । ड्रिलिङ नगरेसम्म उत्खनन्को काम सम्भव हुँदैन । तर खानी उत्खनन्का लागि गर्नुपर्ने ड्रिलिङको काम अन्यौलमा परेको छ ।
दैलेखको श्रीस्थान, नाबिस्थान, पादुका, तल्लो डुंगेश्वर लगायतका क्षेत्रमा बर्षौंदेखि ज्वाला (पेट्रोलियम पदार्थ) बल्दै आएको छ । सोही तथ्यलाई आधार मान्दै दुई बर्ष अघि खानी तथा भूगर्भ विभागले चीनको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् टोलीको समन्वयमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागी अध्ययन गरेको थियो ।
करिव चार महिनासम्म दैलेखमा रहेर प्राविधिक टोलीले दैलेखको दुल्लु, नारायण, चामुण्डाविन्दासैनी नगरपालिका र भैरवी, महाबु डुङ्गेश्वर, नौमुले, भगवतीमाई गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा अन्वेषण गरेर फर्किएको थियो । विभागले चीनको जिओलोजिकल सेन्टर बेइजिङ र चेन्दुङसँग आगामी २०२२ भित्र खानी उत्खनन्को काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर कोरोनाका कारण दुईवर्ष खेर गएपछि म्याद थपेर भएपनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को काम सम्पन्न गर्ने विभागको अपेक्षा छ ।
२०७२ सालको नाकाबन्दीसँगै नेपाल आफैले पेट्रोलियम खानी उत्खनन् गर्ने सपना बाँढ्दै आएको छ । चिनीयाँ प्राविधिक टोली आउने समय भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । कोरोनाको अवस्था सहज भएको खण्डमा चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आउने विभागले जनाएको छ । पहिलो चरणको कोरोना महामारीसँगै अध्ययनलाई बीचमै छोडेर चिनियाँ टोली स्वदेश फर्किएको थियो । त्यसयता चिनियाँ टोली नेपाल फर्केको छैन ।